Seeraar udhaqaajiyaa horjeeda qaadan kartaa in ka badan CEO
Decrypted: sara kacaan degdeg ah udhaqaajiyaa ayaa soo jiitay in todobaadyadii la soo dhaafay. Bilowga sanadka, xaraf suuqa ay ahayd in ka badan $100 billion. Qiimaha Tani waxay ka dhigan tahay koritaanka ee ku dhow 8000% inta lagu guda jiro 2017.
Laakiin caan Seeraar ayaa sababay baahida loo qabo oo dhan cryptocurrencies in ay kawadaan Koofurta ee 2017, crypto riixaya sida udhaqaajiyaa iyo Ethereum, in ay sidoo kale ka faa'iideysan by craze cryptocurrency ah.
our qaadataan: udhaqaajiyaa bilaabay 2017 at $0.006 iyo waxa ay haatan ka baayacmushtari jireen at $1.84. Ma qiyaasi kartaa? Tani waa soo celin wayn! Meel ka durugsan wax Seeraar sameeyey 2017, oo koray oo ku saabsan 1400% sanadkii la soo dhaafay.
Farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya udhaqaajiyaa iyo Seeraar waa in aan la miino. Geedi socodka u baahan in dadka isticmaala Seeraar in ay isticmaalaan algorithms si loo xaqiijiyo xawaalad. Marka la barbardhigo, Udhaqaajiyaa gacanta shirkad fadhigeedu yahay Francisco San. Waxay abuurtaa lacagta iyo soo bandhigtay yaalla cusub xilliyo. Tani waxay ka qaar ka mid ah eedeymaha dhawaan loo soo Seeraar ayaa siidaysay udhaqaajiyaa, kaas oo tilmaamay in lacagta aadka u badan ee tamarta loo isticmaalo inta lagu jiro geedi socodka macdanta.
Maxaad qiimaha udhaqaajiyaa ayaa goor wanaagsan?
marka hore, halkii naively aragto dhexe / baahinta sida binary, Udhaqaajiyaa aqoonsan yahay in baahinta yeelan kartaa qaabab badan oo ay u badan tahay eg ka badan oo qaybaha kala badan Caqiidadani a. "Aragtida in ay wax ka mid ah maamul baahsan ama dhexe waxyeello iyo barbaro dareenka ka fog, waxa aan si dhab ah oo ku saabsan daryeel - waxa xad nidaamyada gaar ah ay leeyihiin sifooyinka faa'iido gaar ah,"Ayuu yiri David Schwartz, Cryptographer Chief at udhaqaajiyaa.
Sabab kale oo ay tahay waxaa jiray isbadal ku dhacay sida qiimaha loo xisaabiyo. Suuqa ayaa crypto CoinMarketCap sameeyey isbedel dhawaan, marka laga reebo is dhaafsi badan Korean ka xisaabin qiimaha ay. Markii hore, CMC ma ka tarjumaya waxa laga xoreeyo. Kooxda heysata dhab iibin karo, iyo in uu keeno wax badan oo jahawareer. Qiimaha cusub waa badan oo sax ah oo macno leh.
Ugu dambayn, racfaanka XRP ee ganacsiga waxaa la xoojiyo. Udhaqaajiyaa ku dhawaaqday in saddex ka mid ah shan shirkadood top xawilaadda lacagta adduunka oo fulin doona udhaqaajiyaa ayaa calaamo XRP in nidaamka socodka bixinta ay sanadkan. Shirkada uu u adkaynayo fududeynta macaamil maaliyeed caalamiga ah waxay ka dhigan tahay waxa la ansixiyay bangiyada iyo hay'adaha kale ee maaliyadda, oo ay ku jiraan Santander, Bank of America oo UBS. Udhaqaajiyaa sheegtay in ay shati ay technology blockchain in ka badan 100 bangiyada taariikhda.
Udhaqaajiyaa bedeli kartaa Seeraar?
Isticmaalka Seeraar iyo udhaqaajiyaa gebi ahaanba kala duwan. Udhaqaajiyaa waa ka dhaqso iyo ka jaban tahay Seeraar, Waxaad dhaqaajin karin walax agagaarka dhakhso iyo waxa aad ku kici doonaa in ka yar Seeraar, a ugu yaraan in muddo ah.
Laakiin uma maleynayo in ay u socoto si ay ugu bedesho Seeraar. Udhaqaajiyaa waxa uu isku dayayaa inuu bedeli Swift iyo bedelaadaha inter-bangiga, geedi socodka in ka badan 5 trillion dollars ah maalin kasta.
Seeraar ayaa dhanka kale waxaa loogu tala galay sida lacagta a, kaas oo la sameeyey si loo isticmaalo hab ka mid ah lacag bixinta. Udhaqaajiyaa ma aha cryptocurrency a.
Udhaqaajiyaa uu leeyahay mustaqbal ifaya. Waxaa ku wareejinaya lacag caalamka lacag yar laga fogaado eedeeyay diinta lacagta. Waxay bixisaa software blockchain in bangiyada iyo leedahay lacagta hooyo (XRP), waayo, la nidaamiyo shaqeeya.
Udhaqaajiyaa guulaysan karo leh ama aan lahayn Seeraar. Waxaa guulaysan kartaa iyada oo aan technology macdanta iyo waxa ay leedahay laayeen ka mid ah magacyada weyn gadaashiisa horeba. Udhaqaajiyaa noqon kartaa cryptocurrency ugu horeysay ee loo isticmaalo by ganacsiga weyn, tan iyo markii ay doonaya in ay carqaladeeyaan adeeg dhaqaale ee hadda.
Wikipedia – udhaqaajiyaa English
Khaladaadka of Сrypto Investors. Er...
Post Previous:Blockchain News 13 January 2018
Post Next:Waxa aan ognahay in ku saabsan Cryptocurrency Gram iyo telegraam ICO